Posted by yemintun86@gmail.com at Monday, March 20, 20170comments
ရွှေတူးဖော်တဲ့ ဒေသခံ တစ်ဦး သေနတ်ကျည် ထိမှန် သေဆုံး
သေနတ်ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကို မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ အောင်ခလိန်ကျေးရွာက ရွှေထွက်ရှိတဲ့နေရာမှာ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ဦးရဲ့သေနတ်ကျည် ထိမှန်ပြီး ဒေသခံတစ်ဦး မနေ့က သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် ရွှေကျင်မြို့မ ရဲစခန်းမှာ လူသတ်မှုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။
သေဆုံးသွားသူရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူက ပုဒ်မ ၃၀၂ နဲ့ လာရောက်အမှုဖွင့်ထားပြီး တပ်မတော်ရဲ့စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေနဲ့ အညီဆောင်ရွက်သွား ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရွှေကျင်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး ဦးသန်းထွန်း က ပြောပါတယ်။
TNLA က ဒေသခံ ၉ဝ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးမှု အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေ ကန့်ကွက်
တအာင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ရှမ်းပြည်နယ် မန်တုံနဲ့ နမ္မတူမြို့နယ်တွေက ရှမ်းတိုင်းရင်း သားဒေသခံ အယောက် ၉၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှမ်းလူထု အဖွဲ့အစည်းတွေက ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
တအာင်း/ပလောင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကြားက သဘောထား တင်းမာမှုတွေ ကို လျှော့ချပေးနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ဒီလိုထုတ်ပြန် ရတာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်ထုတ်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ကော်တိုင်းအဖွဲ့ဝင် စိုင်းလျှမ်းခမ်းက ပြောပါတယ်။
သီပေါမြို့နယ် ဘော်ကြိုနှင့် ကျင်သီကျေးရွာကြား မိုင်တိုင် (၁၂၃)တွင် ရီမုတ်မိုင်းတစ်လုံးတွေ့ရှိ
သီပေါ မတ် ၁၂
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) သီပေါမြို့နယ် ဘော်ကြိုကျေးရွာနှင့် ကျင်သီကျေးရွာကြား မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ်သွား ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၂၃) အေသုံးလုံးကွေ့ ကျင်သီချောင်းတံတားအနီး ကားလမ်းမကြီး၏တောင်ဘက် ၁၅ ပေခန့်တွင် မတ် ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဓာတ်တိုင်ပေါ်တက်၍ လျှပ်စစ်မီးပြင်ရာမှ ဓာတ်တိုင်အနီး ချုံပုတ်အတွင်း၌ အမြင့်ခုနစ်လက်မ၊ ဗြက်လေးလက်မ၊ အလျား ၁ဝ လက်မရှိ ဒေသန္တရမိုင်း (ရီမုတ်မိုင်း)တစ်လုံး တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ တွေ့ရှိရသည့် မိုင်းကို နယ်မြေခံတပ်ရင်းနှင့် မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူ များ သွားရောက်စစ်ဆေး၍ Water Bottle နည်းဖြင့် အသက်မဲ့အောင် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by yemintun86@gmail.com at Monday, March 13, 20170comments
ဆီဆိုင်မြို့ မှာ ပွဲပြန် ဆိုင်ကယ်နှင့် ထော်လာဂျီတိုက်မိ တစ်ဦး သေဆုံး
မတ်လ (၁၂)ရက်နေ့ ည ၈း၃၀ နာရီခန့်လောက်က ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့ တောင်ဖက် နီလာရိုးမစက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် တောင်ဖက် မီတာ ၂၀၀ခန့် အကွာမှာ ပုံးလောင်းဒဲဉ်သီးလာဗွေ ပွဲ မှ ပြန်လာသော ဆီဆိုင်မြို့ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှ ကိုကိုဝင်း မောင်းနှင်လာသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ပုံးလောင်းပွဲသို့လာသော ထော်လာဂျီတို့ တိုက်မိပြီး ကိုကိုဝင်းမှာ နေရာတွင် ပွဲချင်ပီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ရွှေစက်တော် အထက်စက်တော်ရာတွင် ဘုရားဖူးယာဉ် တိမ်းမှောက်၍ တစ်ဦးသေဆုံး
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော် အထက်စက်တော်ရာအတက်လမ်း သုံးထပ်ဆောင် ဗိမ္မာန်အနီးတွင် မတ်လ (၁၂)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီအချိန်ခန့်က ဘုရားဖူးယာဉ် တိမ်းမှောက်ကာ တစ်ဦးသေဆုံးပြီး (၆)ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။
“တပေါင်းလပြည့်နေ့ဆိုတော့ ဘုရားဖူး တော်တော်များတယ်။ ကားတွေကလည်း ပြည့်ကြပ်နေအောင် တင်ကြတယ်။ အခုဖြစ်တာက အထက်စက်တော်ရာကို အတက်မှာ ဖြစ်သွားတာ။ အတက်မှာ မတက်နိုင်ဘဲ တုံးလုံးလဲသွားတာ” ဟု မင်းဘူး/စကုမြို့နယ်ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ရင်း ဒုတိယတပ်ရင်းမှူးတင်ညွှန့်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ဘုရားဖူးယာဉ်မှာ တောင်တွင်းကြီးမှ ထွက်လာသည့် လိုက်ထရပ် ဘုရားဖူးယာဉ်ဖြစ်ပြီး ဘုရားဖူး ခရီးသည်(၃၀)ခန့် တင်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် တောင်တွင်းကြီးမြို့မှ ကိုကြည်နိုင်ဆိုသူမှာ နေရာတွင် သေဆုံးသွားပြီး ကျား(၃)ဦး၊ မ(၃)ဦး ဒဏ်ရာ ရသွားကြောင်း မင်းဘူး/ စကုမြို့နယ် ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ရင်း ဒုတိယတပ်ရင်းမှူးတင်ညွှန့်ထံမှ သိရသည်။
ဒဏ်ရာရသူများအား ဆေးကုသမှုခံယူရန် မင်းဘူးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
http://www.tachileik.net/2017/03/sst.htmlမန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော် အထက်စက်တော်ရာအတက်လမ်း သုံးထပ်ဆောင် ဗိမ္မာန်အနီးတွင် မတ်လ (၁၂)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီအချိန်ခန့်က ဘုရားဖူးယာဉ် တိမ်းမှောက်ကာ တစ်ဦးသေဆုံးပြီး (၆)ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ပွဲတွေကြောင့် လောက်ကိုင် မြို့နယ်မှာ အလုပ်သမား ၇၀ ကျော် ပိတ်မိနေ
ရှမ်းပြည်နယ် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လောက်ကိုင်မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ အလုပ်သမား ဦးရေ ၃ ထောင်လောက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပိတ်မိနေသူ ၇၀ ကျော် ရှိနေသေးတယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရန်လုံကျိုင်းနဲ့ မန်တုံ ကျေးရွာတွေဘက်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရ တာကြောင့် သွားမခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေတယ်လို့ လောက်ကိုင်ခရိုင် ကြက်ခြေနီဦးစီးမှူး တတိယတန်း ဦးစောရွှေမြင့်က ပြောပါတယ်။
တစ်နှစ်အတွင်း ရတနာအခွန် ၁၂ ဘီလျံကျော်ရရှိကြောင်း ကချင်ပြည် နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြော
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တစ်နှစ်အတွင်း ငွေကျပ် ၆၅ ဘီလျံကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းတန်ချိန် ၂ သောင်းကျော် ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ရတနာအခွန်အဖြစ် စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၂ ဘီလျံကျော် ကောက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင် က ပြောပါတယ်။
အစိုးရသစ်ရဲ့ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို မနေ့ညက မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား ကနေ ပြည်သူလူထုထံ အစီရင်ခံတင်ပြတဲ့အထဲမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စက်ရုံအလုပ်သမ တစ်ထောင်ခန့် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေစဉ်
Photo: Khine Zar
စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ ခွင့်ရက် ၁၂၀ ခံစားခွင့်ရရှိဖို့နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့ စက်ရုံအလုပ်သမ တစ်ထောင်ခန့်က ဒီနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။
လက်ရှိဥပဒေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး အလုပ်သမားတွေ ခွင့်ရက် ၉၀ ကျော်သာ ရရှိတာကြောင့် မိခင်တွေ နို့ချိုတိုက်ကျွေးတဲ့ကာလ ပိုမိုရရှိဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး တောင်းဆိုတာလို့ ဆန္ဒပြပွဲစီစဉ်သူ မခိုင်ဇာအောင် က ပြောပါတယ်။
မန္တလေးစက်မှုဇုန်က ရေဆိုးတွေကို ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ထဲ စွန့်ပစ်နေစဉ်
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အရက်ချက်စက်ရုံ ၇၃ ရုံထဲမှာ စက်ရုံအများစုက ရေဆိုးစနစ်တကျစွန့်ပစ်မှု မရှိသလို စွန့်ပစ်မှုနည်းလမ်းမမှန်ဘူးလို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုတွေကို လေ့လာနေတဲ့ မြန်မာအစိမ်းရောင်ပုံရိပ်များအဖွဲ့ရဲ့ တင်ပြချက်အရ လေးရုံသာ စနစ်တကျ လုပ်နေပြီး ကျန်တဲ့စက်ရုံတွေက နည်းလမ်းမှန်ကန်မှုမရှိဖြစ်နေတယ်လို့ ဦးကျော်ကျော်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
"အခုဒီလေးရုံပဲရှိသေးတယ်လို့သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီယာစက်ရုံတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ် အဲ့ဒါ တွေက မသွားရသေးဘူး။ တချို့စက်ရုံတွေက လုပ်တယ် ဒါပေမယ့် နည်းလမ်းမမှန်ဘူးပေါ့ တချို့က ရေကို PH လျှော့ချဖို့ ထုံးတွေရောတာတို့ ကန်တွေနဲ့ လုပ်တာတို့ ဒလက်တွေနဲ့လုပ်တာတို့ နည်းစဉ် မမှန်ဘူးပေါ့ "
ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၁ ဦးကို တွေ့ရစဉ်
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မံစီမြို့နယ်မှာ တရားမ၀င်သစ်ခိုးထုတ်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၁ ဦး နဲ့ သစ်တင်ယာဉ်ယန္တရားမျိုးစုံ ၉၉ စီးကို တပ်မတော်က မနေ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၁ ဦးကို တပ်မတော်က ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်း ဗန်းမော်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး အေးသွင် က ပြောပါတယ်။
RFA TV (မတ် ၂၈)
>> Yamuna >>မြန်မာHIV
“ မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း လိပ်စာများ ”
**အေးဆေးပါ ** (ဟာသ)
16. 8. 2013 မှ 22 . 8. 2013 ရက်အထိ ဟောစာတမ်း
*** တွေးတွေးပြီး ရယ် ***
နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက် ၅ ရက် သတ်မှတ်တာကို စက်မှုဇုန်...
ရွှေတူးဖော်တဲ့ ဒေသခံ တစ်ဦး သေနတ်ကျည် ထိမှန် သေဆုံး...
TNLA က ဒေသခံ ၉ဝ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးမှု အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေ...
စိတ်ကြွဆေးပြား သယ်ဆောင်မှုနဲ့ မြန်မာ ၆ ဦး ဘင်္ဂလားဒေ...
ဖရဲသီးများဖြင့် ဖုံးအုပ်သယ်ဆောင်လာသော ခန့်မှန်းတန်...
ဘီးခွန်ကောက်ခံသည့် စနစ်ကို ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး အတိုင်...
► Aug (306)
► Apr (339)
► Mar (346)
► Feb (260)
► Dec (413)
► Nov (202)
► Sep (425)
► Aug (938)
► Jul (525)
► Jun (879)
► Apr (563)
► Apr 24 (88)
» ရွှေအမြုတေ » ကြေးမုံ » မြန်မာ့အလင်း » ရန်ကုန်တိုင်းမ် » မြန်မာတိုင်းမ်စ် » The Voice » မြစ်မခ » မဇ္ဈိမ » ပေဖူးလွှာ » Eleven » ပေါ်ပြူလာ » ဈေးကွက်ဂျာနယ် » အင်တာနက်ဂျာနယ် » လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် » ရန်ကုန်ဂျာနယ် » 7dayဂျာနယ်
» အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် » အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု » ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) » CPB » မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန) 53;ဂရက် » ကြံ့ဖွံ့ (USDA) » ဦးအောင်ကြည်(USDP)
အသင်းမှ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးမည်
ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခမဲ့ဆေးကုသပေးခြင်းအား ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်...
﻿ အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ တက္ကသိုလ်အဆင့်တွင် စာသင်နှစ်များ မူလကထက် တစ်နှစ်စီထပ်တိုးထားပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ်အချို့တွင်လည်း လက်ခံနိုင်မည့်ကျောင်းသား ဦးရေ လျှော့ချထားကာ ၀င်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခြေခံကြမ်းခင်း ရမှတ်များကိုလည်း တိုးမြှင့်သတ်မှတ်
အဆင့်မြင့် ကဏ္ဍ တက္ကသိုလ် အဆင့်တွင် ယခုပညာသင်နှစ်မှ စတင်ကာ စာသင်နှစ်များ မူလကထက် တစ်နှစ်စီ ထပ်တိုးထားပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ်အချို့...
ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့တွင် မေလ ၂၈ ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများမှ မီးလောင်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့မှု တန်ဖိုး သိန်း ၆ဝဝ နီးပါးရှိပြီး လုံ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်မှာ ရှိတဲ့ မူဆလင်တွေကို ကလေး ၂ ယောက်ပဲ မွေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ထားတဲ့ ကိစ္စကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်လို့ အစိုးရကေ...
မြောင်းမြ ဘုရားချောင်းရပ်ကွက်ရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါကြောင့် လူတစ်ဦး သေဆုံး
၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော မြောင်းမြမြို့နယ် ဘုရားချောင်း တိုးချဲ့ရပ်ကွက်အပိုင် ဘုရားချောင်း (C,D) ရပ်ကွက်တွင်း တစ်နေရာ...
CAVERTA ဆေး ဈေးကွက်၌ အတု ထွက်ပေါ်နေ
အမျိုးသားများ အတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ် ထားသော CAVERTA ဆေးဈေး ကွက်အတွင်း အတုများ ထွက်ပေါ်နေကြောင်း ဈေးကွက်မှ သိရသည်။ CAVERTA ထုတ်လုပ်ဖြန့်ခ...
﻿ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း ရက်စက်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သော မျက်နှာဖုံးစွပ် လူသတ်မှု တစ်နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း တရားလိုပြသက်သေ စစ်ဆေးနေသည့် အဆင့်သာရှိသေး
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း ရက်စက်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သော မျက်နှာဖုံးစွပ် လူသတ်မှု တစ်နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း တရားလိုပြသက်သေ စစ်ဆေးနေသည့် အဆင့်သ...
တိုယိုတာကား အစိတ်အပိုင်းစက်ရုံ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်ရန် စဉ်းစားပြီ
တိုယိုတာ ဘိုရှိုကူ (Toyota Boshoku) ၏ ကားအစိတ်အပိုင်း မြင်ကွင်းပြပုံ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကား ကုမ္ပဏီ ကြီးဖြစ်သော တိုယိုတာကား ကုမ္ပဏီ၏ကားအစိတ်အ...
ရာသီအကူးအပြောင်း အပူရှိန်မြင့်မားမှုကြောင့် ငါးများတွင် ကပ်ပါးရောဂါပိုးများ ရှိနေပြီး လက်ရှိတွင် ငါးသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိ
ဆောင်းရာသီမှ နွေရာသီသို့ အကူးအပြောင်းတွင် အပူရှိန်မြင့်မားနေသောကြောင့် ငါးများတွင် ကပ်ပါးရောဂါပိုးများနှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ကျရောက်နေ...
﻿ လုံးခင်း၊ ဖားကန့်ဒေသများရှိ ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို မေလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဖယ်ရှားရမည်
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသရှိ ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် ယခုနှစ် မိုးရာသီတွင် မလိုလား...
www.yemintun86.blogspot.com မှနူတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။. Theme images by fpm. Powered by Blogger.